System ကိုအုပ်ချုပ်ရေး | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
Topic: System ကိုအုပ်ချုပ်ရေး
Steam Idle Master အလုပ်လုပ်သည်မဟုတ်ပါ နားထောင်ပါ၊ ဈေးပိတ်သွားရင်ကျွန်ုပ်ကဒ်များကိုရောင်းနိုင်ပါသလား။ REBZYA သည် Idke မာစတာသည် Word ကိုလှိမ့်ပြီး Word 2010 ကိုခိုးယူလျှင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုကူညီပါ။
အဘယ်ကြောင့် Google Chrome တပ်ဆင်တိုးချဲ့မဟုတ်လော
အဘယ်ကြောင့် extensions များကို google chrome ကို install လုပ်ကြသည်မဟုတ်လော Browser ၏ cache ကိုရှင်းရန်ကြိုးစားပါ (ချိန်ညှိချက်များရှိ) Browser ကိုပြောင်းပါ။ )) https://www.youtube.com/watch?v=LiCHXKMpoIk Chrome-shit ဗွီဒီယိုတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ မလိုချင်ဘူး။ PS အချက်အလက်အနည်းငယ်သာ၊ အကြောင်းပြချက်များစွာ ...
ကျေးဇူးပြု၍ batch file အတွက် command များထည့်ပါ။ လင်းနို့။ CMD (cmd) - command line စကားပြန်ကိုစတင်ခြင်းကူးယူပါ။ ဖိုင်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက် ပို၍ ကူးယူပါ။ DATE - လက်ရှိရက်စွဲကိုသတ်မှတ်ခြင်း CHKDSK - disk ကိုစာရင်းအင်းများအရစစ်ဆေးသည်။ CLS - CHKNTFS - ပြသနေသည့်မျက်နှာပြင်ကိုရှင်းလင်း။ Btr အချိန် ATTRIB - ပြသခြင်းတွင် disk စစ်ဆေးမှုကိုပြောင်းလဲခြင်း ...
ငါ operating system အဖြစ်ဟာ android tablet ပေါ်မှာ windows10 ဖုန်းကို install နိုင်သလား?
Windows 10 ဖုန်းကို android tablet တွင် operating system အဖြစ်တပ်ဆင်နိုင်ပါသလား။ ဖြစ်နိုင်သည် Windows 10 ဖုန်းထွက်လာပြီး tablet ထုတ်လုပ်သူများကလိုအပ်သော driver များကိုရေးသောအခါ၎င်းတို့သည် system ကို gadget နှင့်ညှိပေးလိမ့်မည်။
Windows ကို7SP1 အတွက် system configuration က msconfig ကို disable လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Windows7SP1 တွင် msconfig system configuration ကိုမည်သို့ disable လုပ်ရမည်နည်း။ Kzhtsya yuzay - vindovsfix ဤနေရာတွင်ဤနေရာတွင်ဆွေးနွေးထားသည်။ ru သင်မကြာသေးမီကအကြံပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ - ကွန်ပျူတာကိုပိတ်ထားတော့မည်မဟုတ်။ ပေါ်…
56 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,682 စက္ကန့်ကျော် Generate ။